Miaina anaty tebiteby ary mametra-panontaniana : ho tafody velona an-tanindrazana sa tsia ireo Malagasy lasa nitsabo tena any Inde ka tafahitsoka any noho ny fikatonan’ny sisintany, manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.
Marary ny sasany eo ampiandrasana ny fodiana, misy ny efa namoy ny ainy. Nisy fianakaviana iray tonga tany Inde tamin’ny desambra 2019, nitsabo ny zanak’izy ireo izay voan’ny homamiadan’ny tsokan-damosina. Maty tamin’ny 20 mars 2020 anefa io zaza io.
Noho ny tsy mbola afahahan’izy ireo mody aty Madagasikara mantsy dia voatery tazomina ao an-trano ny razana izay miendrika lavenona satria tsy maintsy nodorana. Matory miaraka amin’ny faty ireo fianakaviany sisa tavela any an-toerana ankehitriny na dia mifanohitra amin’ny maha Malagasy « Velona iray trano, maty iray fasana » aza izany.
Marefo ara-po ny renin’ilay zaza amin’izao vokatry ny toe-javatra iainana any Inde eo ampiandrasana ny valinteny tamin’ireo fangatahana tany amin’ny masoivoho any Inde sy ny taratasy misokatra nalefan’ireo Malagasy tavela any Inde tamin’ny filoham-pirenena, miangavy ny hamelana azy ireo hody an-tanindrazana.
Manodidina ny 100 eo ireo mbola mihitsoka any an-toerana amin’izao, ary saika nitsabo aretin’ny voa no nandehanan’izy ireo tany, nisy natao grefy ny sasany.
Efa vonona hiantoka ny saran'ny fiaramanidina izy ireo, efa nahita Kaompania manaiky hitondra azy ireo aty Madagasikara fa miandry ny fanapahan-kevitry ny Filoham-pirenena sisa. Manaiky ny hanaja sy hiantoka ny lany rehetra amin'ny fihibohana sy fanaovana fitiliana ihany koa rehefa tonga eto an-toerana.
Malahelo izy ireo fa misy ireo Malagasy niantohana mihitsy aza ny saran-dalana sy ny fakana azy ireo tany amin'ny firenen-kafa, nefa izy ireo vonona hianto_tena tsy avela mody, na dia zo fototra ny maha Malagasy azy ireo aza ny mody an-tanindrazana.